I-CASABLANCA 3 I-BEACHFRONT YOMNTU
ERio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJeanne
Elona NDAWO ELIHLE KWILOTI: eyona ndawo ikhuselekileyo, eyona ikhululekileyo, eyona inomtsalane kwaye ifikeleleka kakhulu, iCasblanca 3 ngokuqinisekileyo INDAWO yakhe nabani na ofuna ukuchitha iintsuku ezithile eRio etshintshanisa ubomi besixeko obuxineneyo kunye nokuzola kwendalo.
I-CASABLANCA 3 yinto ekhethekileyo kakhulu, enombono omangalisayo kodwa, njengesiqhelo, ukufikelela kubude kufuneka unyuke! Ziinyawo ezili-130 ukuya eCasablanca 3, ukunqumla indawo yethu kwigadi entle yetropiki. Ngenxa yoko asicebisi indlu yethu kubantu abadala okanye abantwana abancinci. Ukuba uthanda ukuhamba ngemithwalo enzima siya kubonelela umntu ukuba ayinyuse phezulu!
Elona NDAWO ELIHLE KWILOTI: eyona ndawo ikhuselekileyo, eyona nto ikhululekileyo, eyona inomtsalane kwaye ifikeleleka kakhulu, iCasablanca 3 ngokuqinisekileyo INDAWO yesibini esifuna ukuchitha iintsuku ezithile eRio sitshintshana ubomi obunzulu besixeko kunye nokuzola kwethu. indawo. Ifakwe kulwandle olumangalisayo lwetropiki, ecaleni kweSheraton Resort yobutofotofo, sisekuqaleni kwe-Upper Leblon, imizuzu embalwa ukusuka kweyona ndawo yokutyela eRio, Ipanema kunye neCopacabana. Iibhasi, iiveni kunye neeteksi zikusa kuyo yonke indawo esixekweni. ICasablanca 3 yeyona ndawo ilungileyo yokuhlala eRio de Janeiro: isandula ukwakhiwa kwindawo ecwangcisiweyo, ikunika indlela elungileyo yokonwabela esi sixeko simangalisayo kwiholide ongasoze ulibaleke! ICasablanca 3 ingaphakathi kwigadi entle ethe tyaba ejonge elwandle kunye nolwandle oluhle lwaseVidigal, olusetyenziswa ziindwendwe zikaSheraton, lula ukufikelela kwimizuzu emihlanu yokuhamba. Ukusuka eCasablanca 3ukwanayo nokufikelela kwipaki ekhuselweyo "iParque do Penhasco dos Dois Irmaos", enezityalo ezimangalisayo zetropikhi kunye nezilwanyana (kubandakanya iinkawu kunye neetoucans) kunye nombono omangalisayo kulwandle lwase-Ipanema kunye neLagoa Rodrigo de Freitas, ichibi elinomtsalane eZona. Emazantsi eRio de Janiero.
Lumka, uya kubuya!
4.84 · Izimvo eziyi-372
IVidigal, indawo esihlala kuyo, yeyona favela "esindisiweyo" ephumeleleyo eRio. Kule minyaka yokugqibela ibe yindawo epholileyo edolophini, kulapho abaculi kunye neehipsters bafudukela khona, onke amaphepha eendaba abhala ngayo. Silapha kanye kwiVidigal, malunga neemitha ezingama-500 ukuya kwicala laseLeblon-Ipanema.
Sihlala kwipropathi enye kwaye siyavuya kakhulu ukunceda kwaye sincokole neendwendwe zethu
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rio de Janeiro